Samy manana izay mahamaika azy…
Nakarin’ny mpisolovava azy eny amin’ny Filankevi-panjakana ny fanalana ny tonia voalohany mpampanoa eo anivon’ny fitsarana tampony. Takin’izy ireo ny fanafoanana ny didim-panjakana sy ny fampiatoana ny didy fampiharana amin’izany.
Mitaky ny fialan’ny minisitry ny Fitsarana ny Sendikàn’ny mpitsara eto Madagasikara (SMM), momba ny « Raharaha Houcine Arfa ». Tsy olona efa hisotro ronono tsy mitsinjo ny tombontsoa iraisan’ny mpitsara no mendrika izany andraikitra izany.
Hanadihady ny minisitry ny Fitsarana momba ny « Raharaha Houcine Arfa » ny Bianco. Tsy ny amin’ny fitsoahana ny fonja no hifotoran’ny fanadihadiana, fa ny amin’ny fisian’ny kolikoly. Efa vita famotorana ny mpitsara sy ny mpampanoa lalàna.
Nanao fitokonana fanairana ny Firaisankinan’ny sendikà eto Madagasikara (SSM), iraisan’ny mpiasam-panjakana sy ny tsy miankina. Antony ny tsy fiheverana ny zo sy ny fitakian’izy ireo: fisondrotan-karama, famerenana ireo mpiasa noroahina tsy ara-dalàna…
Miantso atrikasam-pirenena, hatao ato ho ato, hamahana ny fahasahiranana eto amin’ny firenena ankehitriny ny Komitin’ny Fahamarinana sy ny fandriampahalemana ary ny fiadanana (K 3F), Fianarantsoa. Efa nisy ny nanoina ny antso tamin’ny fanangonan-tsonia.
Namoaka fanambarana momba ny lalàm-pifidianana ny Sefafi. Tokony ho samy afa-manao hetsika politika toy ny ataon’ny HVM ny rehetra, mialoha ny fampielezan-kevitra, fa tsy sakantsakanana. Nefa ny fanjakana no miantoka ny lanin’ny HVM amin’izany.
Nilaza ny fitondrana sy ny Ceni fa tsy ofisialy ny famoahana datim-pifidianana nataon’ny minisitry ny Raharaham-bahiny. Andrasana ny fivoahan’ny lalàm-pifidianana vaovao. Manomboka anio ny fivoriana tsy ara-potoan’ny Antenimiera roa tonta.
Nanomboka ny fitsidiham-paritra tany Ambilobe, faritra Diana, nanazavany ny Finiavana ho fanandratana an’i Madagasikara (IEM) ny filohan’ny Tetezamita teo aloha, Rajoelina Andry. Vonona hitondra paikady maharitra sy manara-penitra hanavotana ny firenena izy.
Samy manana izay mahamaika azy avy?